Cielomoto, dhulgariir hawada ku jira Maxay yihiin? | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Dhacdooyinka saadaasha hawada, Sawirro
Sawir laga soo qaaday aliforniamedios.com
Dhulgariirku horeyba wuu ula yaabay qof walba oo aaggaas ku nool, laakiin kuwa hawada ku dhaca xitaa waa dhacdooyin la yaab leh. Waana taas, qiyaasi inaad si deggan u socoto, oo aad bilowdo inaad aragto wax la yaab leh. In taas, waxaad fiirisaa cirka oo waxaad aragtaa wax la yaab leh, oo sababa qaylo dheer oo xitaa waxay keeni kartaa gariir. Sideed dareemi lahayd?
Ifafaalaha waxaa loo yaqaan magaca mooto cirka, Skyquake ama Skyquake. In kasta oo aaney cusbayn, saynisyahannadu illaa hadda ma aysan awoodin in ay sharraxaad macquul ah ka bixiyaan sida iyo sababta ay u samaysmaan.
Cirka waxaa laga abuuri karaa meel kasta oo adduunka ah, laakiin Maraykanka, Koofurta Ameerika iyo Ustaraaliya ayaaba ugu dambeysey inay arkaan. Muwaadiniinta si nabad ah u seexanayay, oo iyagu si lama filaan ah u bilaabay inay maqlaan dhawaq ka yeeraya muraayadaha muraayadaha. Qof kastaa wuu u malayn karaa inay ahayd bilowgii Armageddoon ama dhammaadka adduunka. Xaqiiqdii, waa wax iska caadi ah dadka arkay inay qoraan faallooyin qaylo dhaan ah oo ku saabsan astaamahooda warbaahinta bulshada. Laakiin xaqiiqadu waa taas ma jiraan wax laga walwalo.
1 Maxaa Keena Cirka?
2 Waa cusub?
3 Kiisaska caanka ah ee 'cielomotos'
Maxaa Keena Cirka?
Sidaan soo sheegnay, weli ma jiraan hal aragti oo sharraxaysa ifafaalaha. Hadda, haddii aad ku nooshahay ama aad in muddo ah ku noolayd gobol xeebeed, waxaa hubaal ah inaad maqashay mowjadaha ku soo dhacaya buurta. Hagaag, waxay soo baxday in dhawaqa awooda badan ee ay dhaliso ay sabab u noqon karto methane ay sii daayeen kristantarro ka soo jeeda badda hoose. Gubasho tani waa gaas soo saari kara guux weyn.
Ka dib mowjadaha, badmaaxayaashu waxay inta badan dhahaan sidaas waxay maqleen dhawaq aad u sareeya intaad ku tababaraneyso ciyaartan. Xitaa tsunamis waxaa la socon kara dhawaqan cajiibka ah.
Aragtiyo kale ayaa tilmaamaya in nalalka cirka laga soo saari karo:
diyaarad sare kuwaa jabiya xayndaabka codka
un meteorite taasi ayaa ku qaraxday jawiga
Si kastaba ha noqotee, dhammaan aragtiyahaas lama muujin karin. Waa run in aboor-cirku ka dhaco gobollada xeebta, laakiin iyagu kuma eka oo keliya halkaas; Dhinaca kale, khubarada ku xeel dheer diyaaradaha heerka sare ayaa beeniyay in dhawaqa cirka uu la mid yahay kan baabuurta aan soo sheegnay. Marka laga hadlayo meteorites-ka, dhagaxaan ka imanaya meelaha bannaanka ah markay galaan jawiga waxay ka tegayaan nal iftiin ah, oo ka sii iftiimin doona intay leeg tahay Cirku ma bixiyo wax nal ah.
Marka, sharraxaadda cilmiyaysan ee ugu aqbalsan waa tan oraneysa taas marka lakabyada hawo kulul iyo qabow ay isku dhacaan waxay abuuraan qarax, sidaas darteed keenaya dhawaaq, hubaal, inaadan si fudud u ilaabi karin. Si aad u badan, in ay caadi tahay in dadku u baahdaan daryeel caafimaad madax xanuun daran, calool xanuun ama dhibaatooyin kale oo yar.
Sawir laga soo qaaday supercurioso.com
Waa dhif iyo naadir, laakiin maya, maahan dhacdo cusub. Waa inuu caddeyn u yahay inay jireen ilaa bishii Febraayo 1829. Waqtigaas, koox ka mid ah dadka deggan New South Wales (Australia) waxay ku qoreen safarkooda: 'Abaarihii 3 galabnimo, aniga iyo Mr. Hume waxaan warqad ku qornayn dhulka. Maalintaas si layaab leh ayey u fiicnayd, iyada oo aan daruuro cirka ka joogin ama neecaw yar. Si lama filaan ah ayaanu u maqalnay waxa u muuqday qarxinta madfac fogaan u jira shan ilaa lix mayl. Ma ahayn dhawaqa godka leh ee qarxa dhulka, ama codka uu soo saaray geed dhacaya, laakiin dhawaqa caadiga ah ee xabbad madaafiic ah. (…) Mid ka mid ah ragga isla markiiba wuxuu fuulay geed, laakiin waxba kama uusan arkin wax caadi ah.
Qaarad kasta waligeed lama arag. Tusaale ahaan, Ireland, waa kuwo aad u soo noqnoqda, markaa waxaan ka hadlaynaa dhacdo run ahaantii jirta, laakiin aan weli wax badan ka ogayn. Toddobaatanaadkii, khadadka cirka ayaa noqday arrin culeys ku noqotay Mareykanka oo Madaxweyne Jimmy Carter uu amar ku bixiyay a baaritaan rasmi ah ku saabsan arrinta. Nasiib darrose, wuxuu garan waayey asalka cirka.
Kiisaska caanka ah ee 'cielomotos'
Kuwaas lagu sheegay ka sokow, waxaa jira kiisas kale oo caan ah:
Sanado aad u yar ka hor, sanadkii 2010, mooto cirka ayaa laga soo sheegay Uruguay. Gaar ahaan, waxay ahayd Febraayo 15 markay ahayd 5 subaxnimo (waqtiga GMT). Waxay sababtay, sawaxanka ka sokow, gariir magaalada ka dhacay.
20 Oktoobar 2006, magaalooyinka u dhexeeya Cornwall iyo Devon, UK, ayaa soo sheegey in "qaraxyo qarsoodi ah" ay waxyeeleeyeen guryo.
Markay ahayd Janaayo 12, 2004, mid ka mid ah dhacdooyinkan ayaa Dover (Delaware) gariiray.
Bishii Febraayo 9, 1994, mid ayaa laga dareemay Pittsburgh (Mareykanka).
Maaddaama aan la ogaan karin xilligan, waa inaan ogaanno yeelo dulqaad oo sug inaad aragto goorta iyo meesha tan xigta ay dhici doonto. Ayaa garanaya, laga yaabee inay udhawdahay sidaad moodeysay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Cielomoto, dhulgariir hawada ku jira
Xalay, taasi waa .. March 23, 2016, 23.30:2010 pm waqtiga Uruguay, magaalada Montevideo, gaar ahaan si sax ah xaafad la yiraahdo Santa Catalina, oo xuduud la leh buuraha Montevideo, mootada cirka ayaa dhacday. Waan fahamsanahay inay horay u dhacday, 2011, XNUMX iyo hadda munaasabaddan. Deriska ayaa maqlay dhawaqa weyn, waxayna dareemeen guryahooda inay ruxmayaan, waxay ka fikireen warshad diiwaangelin oo u dhow ... laakiin ma shaqeyneyso.
Jawaab Lourdes Beatriz Cabrera Mendez
Subaxnimadii hore ee Maarso 30, 2016. In Buenaventura - Valle del Cauca. Waxaa jiray shay la socday duufaan koronto, koronto la'aan iyo dhaawac soo gaadhay bannaanka guriga. Weligay ma aan dareemin wax sidan oo kale ah. Waxay u egtahay inaad kujirto bartamaha duufaan. Buuq xad dhaaf ah
Ku jawaab Angela Maria Ortiz
7:54 am Talaado Juun 14, 2016 Pacasmayo - Peru. sanqadh weyn, sida haddii gaari xamuul ah uu tuurayo dhagxaan, daaqadaha guryaha ayaa laga dhawaajiyay, wax walba aad ayay u dheereeyeen laakiin hubaal in ka badan hal ayaa cabsi soo food saartay
Ku soo jawaab Cristián montenegro
Shalay, Nofeembar 24, 2016, dhulgariir ayaa markale laga dareemay laba waaxood oo ka tirsan dalka Uruguay qiyaastii. 21: 00 pm ee Canelones iyo Montevideo waxay yiraahdaan wuxuu u eg yahay qarax weyn oo iftiiminta iftiinka ayaa la arkay, ifafaalooyinkan ayaa halkan aad ugu badan.
Ku soo jawaab Patricia
Laba habeen ayaa laga maqlay Córdoba Veracruz Janawari 19 iyo 20, 2017
Ku jawaab Mohesa Hernández
Shalay, Agoosto 17, 2017, qiyaastii 08:30, ee gobolka Araucania. Chile, dhacdo la mid ah astaamo isku mid ah ayaa la soo maray.
Jawaab Liliana Leiva Jorquera
Aad u xiiso badan, kiiska cirka waa in sifiican loo darsaa
Ku jawaab santiago atenas moreno
Aki, oo ka tirsan gobolka Puebla, Tlapanala, waxaa ku soo dhacday duufaan cirka Janaayo 5, 2018 goor barqo ah Janaayo 6
Dhacdadani waxay dhacday maanta, Khamiista, Febraayo 27, 2020 markay tahay 02, magaalada Bahía de Caráquez, ee Ecuador.
Jabaq xoog badan ayaa laga maqlay cirka, sida in qarax dhacay oo kale, in kasta oo aan wax dhaqdhaqaaq ah laga dareemayn dhulka (taas oo na siisay degenaansho dhulgariir), daaqadaha iyo albaabbadu way ruxmayeen.